पुरुषहरुको अन्डकोष किन सुन्निन्छ ? अन्डकोष दुखेको वा सुन्नेको छ भने यसो गर्नुहोस | rochak nepali khabarside
पुरुषहरुको अन्डकोष किन सुन्निन्छ ? अन्डकोष दुखेको वा सुन्नेको छ भने यसो गर्नुहोस
म २२ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । केही दिनदेखि मेरो दाहिने अण्डकोष दुख्नुका साथै केही सुन्निएको छ, जसले गर्दा मलाई दैनिक क्रियाकलापमा केही असहज महसुस भैरहेको छ । यो समस्याका बारेमा मैले परिवारका सदस्यहरूसँग छलफल पनि गर्न सकेको छैन । के कारणले गर्दा यस्तो भएको हो ? के हस्तमैथुनका कारण यस्तो समस्या देखा पर्छ ? पछि गएर मेरो सन्तान नहुने पो हो कि ? यो समस्याको कुनै उपचार छ कि ?